Midawga Afrika oo Wakiil Cusub u magacawday Dalka Somalia |
Midawga Afrika oo Wakiil Cusub u magacawday Dalka Somalia
Dr Nkosazana Dlamini Zuma, oo ah Gudoomiyaha midowga Africa ayaa kudhawaaqday magacaabida Dr. Maman S. Sidikou, oo Nigeria kasoo jeeda inuu noqonayo wakiilka midowga Africa uqaabilsan Somalia iyo madaxa Howlgalka AMISOM.
Magacaabidan ayaa imaaneesa waqti uu sii socdo hormarka dalka uu gaarayo iyadoona ay sii socdaan wadahadalada nabadeed ee dalka kasocoda ayaa lagu yiri warkan oo kasoo baxay midowga Africa Ee lagu magacaabay Wakiilkaan.
Ninkan noqonaya wakiilka midowga Africa ee Somalia Dr. Maman S. Sidikou, ayaa ah Nin qibrad dheeraad ah uleh dhanka siyaasada ,diplomaasiyada ,xiriirka iyo arimaha bini aadanimo waa sida warka lagu yiri.
Wakiilkan cusub ayaa soo noqday safiirkii Nigeria ufadhiyay dalka mareykanka sanadkii 2011 ,wuxuu sidoo kalle soo noqday agaasimihii wasaarada warfaainta dowlada Nigeria isagoona sidoo kalle soonoqday agaasimaha xafiiska ra’iisul wasaraha iyo lataliye madaxweyne.
Sanadkii 1997 ilaa 1999 wuxuu ahaa wasiirkii arimaha dibada Nigeria intaa kadib sanadkii 1999 wuxuu noqday agaasimihii madaxtooyada qaranka dalka Nigeria.
Dr Sidikou ayaa la soo shaqeeyay ururo madaxbanaan sida hay’ada mareykanka ee USAID ,bankiga aduunka ,Unicef iyo Safe the Children.
Dr Sidikou ayaa shahaadada P.h.D waxaa uu ka qaatay jaamacada Florida State University, oo amreykanka ku taala wuxuuna sidoo kalle darajada koowaad ee jaamacada kuqaatay saaxafada ama journalism .
Wakiilkan cusub ayaa waajibaadkiisa bilaabi doona bisha August ee sanadkan ,isagoo sidhow ula shaqeyn doona dowlada Somalia iyo wadamada Gobolka ,midowga Africa,midowga yurub ,wadamada jaamacada carabta si loosoo celiyo nabada Somalia iyo si loo fududeeyo in doorasho ay kadhacdo Somalia sanadka 2016 ayaa lagu yiri warka kasoo baxay midowga Africa.
Dr Sidikou ayaa badalaya Amb Mahamat Saleh Annadif,kaa oo xilkan hayay laga soo bilaabo bishii November 2012 ilaa June 2014.
buy Malegra, acquire clomid.